कोरोनाभाइरस: सन्तानब्बे वर्षीया महिला भइन् सङ्क्रमणमुक्त | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
कोरोनाभाइरस: सन्तानब्बे वर्षीया महिला भइन् सङ्क्रमणमुक्त
प्रकाशित मिति १३ चैत्र २०७६, बिहीबार १४:०६ लेखक नेपाली जनता
बिबिसी । दक्षिण कोरियामा एक ९७ वर्षीया महिला कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट मुक्त भएको समाचार संस्था योन्हाप न्यूजले जनाएको छ। ती महिलाबारे थप जानकारी दिइएको छैन, तर यसलाई वृद्धवृद्धाको हकमा झन् घातक मानिएको कोरोनाभाइरसविरुद्धको सकारात्मक समाचार भनिएको छ।
उनी कोभिड-१९ रोगबाट निको हुने सबैभन्दा वृद्ध व्यक्ति बनेकी छन्।
यसअघि चीनले मार्चमा १०० वर्षीय पुरुष कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट मुक्त भएको बताएको थियो।
जापानको राजधानी टोक्योका अधिकारीहरूले शहरवासीहरूलाई सप्ताहान्तमा घरभित्रै बस्न आग्रह गर्दै त्यहाँ सङ्क्रमण ह्वात्तै बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
बुधवार ४१ नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भए पनि टोक्योमा अन्य ठूला शहरमा जस्तो प्रतिबन्धहरू लागेका छैनन्। तर गर्भनर युरिको कोइके भन्छिन्: “हामी सबैजनालाई कुनै पनि अवस्थामा अत्यावश्यक नभई यो साता घरबाहिर ननिस्कन अनुरोध गर्छौँ।
उनले सबैलाई घरैबाट काम गर्न र राति पनि ननिस्कन आग्रह गरिन्।
जापानमा १,२०० जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ भने ४३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
दक्षिण एशियामा के भइरहेको छ?
भारतमा बिहीवार २१ दिने लकडाउनको दोस्रो दिन हो। त्यहाँ ५५० जनाभन्दा बढीमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको र १० जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
पाकिस्तान दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण भएको देश हो। त्यहाँ १,००० जनाभन्दा बढीमा सङ्क्रमण देखिएको छ जसमध्ये चार सय सिन्ध प्रान्तमा रहेको छ।
बाङ्ग्लादेशमा कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ३९ पुगेको छ। तर गत २४ घण्टामा त्यहाँ आन्तरिक उडान र सार्वजनिक यातायात बन्द गरेपछि नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका छैनन्।
बिबिसी ।श्रीलङ्कामा बुधवार सङ्क्रमितको सङ्ख्या १०२ पुगेको छ र त्यहाँ अनिश्चितकालीन कर्फ्यु कायम छ।
सभामुख मनोनयनका लागि आज मनोनयन हुँदै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख पदका लागि आज उम्मेदवारको मनोनयन हुँदैछ ।
संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार आज बिहान १० बजेदेखि…
काठमाडौँ — एसईईको ग्रेडवृद्धि (पुरक) परीक्षा आगामी साउनको २६ र २७ गते हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले…
धरानमा डेंगु नियन्त्रण बाहिर: विराटनगर र दमकमा पनि देखियो
सुनसरी । सुनसरीको धरानमा डेढ सातादेखि फैलिएको डेंगु नियन्त्रणबाहिर गएको छ । सुनसरीकै इनरुवा र इटहरी हुँदै मोरङको विराटनगर र…
आजबाट आईपीएल सुरु, को–को छन् खेलाडी ?
काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटको ११ औं संस्करण शनिबार सुरु हुँदैछ ।
प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा चेन्नेई सुपरकिङ्स र…
न्युयोर्क । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले मंगलग्रहमा जैविक वस्तुको अवशेष र रहस्यमय मिथेन पत्ता लागेको जनाएको छ । नासाले…
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आत्महत्याको धम्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र निवास बालुवाटारमा उनलाई भेट्न पुग्ने…
टेकुमा उपचाररत दुई जनाको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ 27 views